M/weyne Trump oo mar kale ugu hanjabay cunaqabateyn dhaqaale dalka Turkiga… – Hagaag.com
M/weyne Trump oo mar kale ugu hanjabay cunaqabateyn dhaqaale dalka Turkiga…
Posted on 14 Janaayo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ugu hanjabay cunaqabateyn dhaqaale dalka Turkiga oo qorsheynaya in uu la dagaalamo xoogagga Kurdiyiinta Suuriya marka uu Mareykanka ka boxo dalkaasi.
Xoogagga Kurdiyiinta ee garabka ka siiya Mareykanka la dagaalanka kooxda ISIS ee ka dagaalanta waqooyiga Suuriya ayaa waxaa soo wajahday cabsi badan tan iyo markii uu Mareykanka ku dhawaaqay in uu ciidamadiisa kala baxayo dalka Suuriya.
Trump ayaa soo saaray baaq ay ku kala bad-baadayaan labada dhinac ee xoogagga Kurdiyiinta ee loo yaqaan YPG iyo ciidamada Turkiga. Baaqaas ayaa ah in labada dhinac ay kala sameystaan xad cabirkiisu yahay 32 kilomitir kaas oo labada dhinac eysan isu soo dhaafi karin.
Waxa uu Trump sidoo kale ku hanjabay in uu weeraro kasoo qaadi doono xarumo ciidan oo ku dhow Suuriya hadii ay xaaladda cakiranto amaba ay ISIS soo rogaalceliso.